En vente actuellement 05/12/2018
1. Tsy nisalasala i Katy Perry namoaka 50.000 dolara mba iarahany mandehandeha amin’ny “moto” miaraka amin’i Orlando Bloom.
Nataon’ity farany lavanty mantsy io fitsangatsanganana miaraka aminy io mba entina hanampiana ireo niaram-boina nandritra ilay doro-tanety tao Kalifornia.
Vary nendasina amin’ny kaofitira sakay
Akora ilaina · Vary 500g · Tongolo gasy hasiny 3 · Tongolo be 1 · Katsaka kely 3 · Karaoty 1 · Petit pois 2 sf · Atody efa voakapoka 1 · Saosy trondro 2 sk · Kaofitira sakay 2 sk
Shopping « Chaussures à talons »
1. Escarpin – 40.000Ar - P 37 – 40 commande sur Facebook “ Hika Farany” 2. Sandale à talon carré – 40.000 Ar - P 37 – 40 commande sur Facebook “ Hika Farany” 3. Escarpin nude – Shoes By Paris » - P 37 – 40 commande sur Facebook “ Hika Farany”
Mpifankatia very peratra tao New York, hitan’ny polisy tamin’ny alalan’ny tambajotram-pifandraisana
Latsaka tao anaty tatatra tao New York ny peratra fangataham-bady vao avy natolotry ny lehilahy tera-tany britanika iray, ho an’ny olon-tiany tao an-toerana.
Lasan’i Ada Hegerberg ny « ballon d’or » ho an’ny kitra vehivavy
Ilay norveziana, Ada Hegerberg, 23 taona no nibata ny « Ballon d’or » sokajy vehivavy, ary notolorana azy ny 3 desambra lasa teo tao Paris izany amboara lehibe izany.
Notoriany ny « British Airlines » fa napetraka teo akaikin’ny olona matavy loatra izy
Nitory ny kaompaniam-pitaterana an’habakabaka “British Airlines”, teny amin’ny fitsarana ao Londres, ny lehilahy iray 51 taona, satria napetraka teo akaikin’ny olona matavy loatra nandritra ny adin’ny 12 ora sy fahatelony ny tenany.
Mpilalao horonan-tsary voaheloka noho ny akanjo nanaovany
Amin’ny volana janoary izao i Rania Youssef, mpilalao horonan-tsary egiptianina no hiakatra fitsarana. Nanao akanjo manify loatra mantsy izy nandritra ny “festival international du film du caire” farany teo.
Mampivelatra ny sain’ny zaza ho tia mamorona sy mikaroka
Samy manana ny fahaiza-mikaroka sy fahaiza-mamorona avokoa ny ankizy tsirairay. Tsy mitovy kosa ny fisehony. Azo atao ny mampivelatatao
«Ce sont les petites attentions qui font les belles relations »
Saika isan’andro dia maharay fitarainana sy fangalana torohevitra ny Jejoo mahakasika ny olana ara-pitiavana hiainan’ny mpamaky. Na lahy na vavy, na firy taona na firy taona ary tsy mifidy saranga izany.